एनआरएनए अमेरिकालाई प्रश्नः हाम्रो मताधिकार किन खोसियो ? – Durbin Nepal News
एनआरएनए अमेरिकालाई प्रश्नः हाम्रो मताधिकार किन खोसियो ? भट्टराईको महासचिवमा उम्मेदवारी
दूरबिन नेपाल २० फाल्गुन २०७५, सोमबार ०५:२३
न्युयोर्कको चिसो साँझ, बाहिर सडकमा झन्डै ७० प्रतिशत हिउँ परिरहेको थियो । बाहिर चिसोले कठ्याङिग्रीने अवस्था थियो । तर रुजवेल्ट एभिन्युको ७४ स्ट्रीटमा रहेको होटेल हिमालयन याकभित्रको सभाहलमा गरमागरम बहस चल्दै थियो । कार्यक्रममा एनआरएनए अमेरिका अन्तर्गत सदस्य सुपरिवेक्षण तथा आन्तरिक प्रमाणीकरण समितिले आफूले गरेको कामहरूको फेहरिस्त बयान गर्दै थियो ।
आयोजक मध्ये सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक डा रुद्र अर्याल सदस्यहरू शैलेश श्रेष्ठ र प्रमोद सिटौला तथा आन्तरिक प्रमाणीकरण समितिका सदस्य पवन योञ्जनको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम, तोकिएको समयभन्दा झन्डै चालिस मिनेट पछि सुरु भएको थियो । नरम छलफलबाट शुरुभएको कार्यक्रम एकाएक चर्काचर्कीमा पुग्यो ।
आयोजकलाई पटक पटक सहमागीहरुलाई साम्य बनाउन हम्मे हम्मे परेको थियो । कार्यक्रमलाई औपचारिक समापन नै हतारमा गर्नुपरेको अवस्था थियो । त्यसपछि केही सहभागीले आफ्नो जिज्ञासा राख्न नपाएको अनुभूति गरिरहेका थिए । सहभागीहरूले एनआरनले आफ्नो मताधिकार खोसेको तथा पद हडप्ने दाउमामात्र रहेको भन्दै आरोप लगाइरहँदा सुपरिवेक्षण तथा आन्तरिक प्रमाणीकरण समितिका सदस्यहरूले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेका थिएनन् ।
कार्यक्रम सुपरिवेक्षण तथा आन्तरिक प्रमाणीकरण समितिले गरेका कामको जानकारी दिन आयोजना गरिएको भए पनि सहभागीहरूले सदस्य बन्न नपाएको झोक पोखेका थिए । सहभागीहरूको प्रश्नको उत्तर दिन तयार भएका एनआरएनएका महासचिव बाबुराम लामाको जवाफबाट पनि सन्तुष्ट नभएपछि सहभागीहरू झन् आक्रोशित बनेका थिए । एनआरएनको सदस्य बन्दै गर्दा, आइडीको गोप्यता भङ्ग हुने हल्ला फैलाउने, अनि सर्भरले काम नगर्दा पनि सदस्य बन्ने समय थप्न नदिन विभिन्न संस्थाबाट धम्की दिइएको र सोही आधारमा समय पनि नथपिएको भन्दै सहभागीहरूले गुनासो पनि गरेका थिए । त्यति मात्र होइन केही सहभागीहरूले आयोजकको कामको खुलेर प्रशंसा पनि गरिरहेका थिए । साक्षात्कार कार्यक्रममा न्युयोर्कमा रहेका नेपालीहरूको विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
भट्टराईको महासचिवमा उम्मेदवारी
सुपरिवेक्षण समितिले छानबिन समितिले बुझाएको रिपोर्टको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा बोर्ड अफ डाइरेक्टर गोपेन्द्र भट्टराईले महासचिवमा आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेका छन् । एनआरएनए अमेरिकाको वेबसाइट निर्माण समितिको सहसंयोजक भएर काम गरेका गोपेन्द्र भट्टराईले इन्डियाना राज्यमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनले महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणासँगै आफ्नो लक्ष र उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन् । यस अघि एनआरएनए अमेरिकाको साइन्स टेक्नोलोजी तथा इनोभेशन समितिका संयोजक पशुपति पाण्डेले पनि महासचिवका लागि उम्मेदवारी सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
२० फाल्गुन २०७५, सोमबार ०५:२३ मा प्रकाशित